Shiinaha RC-A11-II tusiyaha wakhtiga rarka badbaadada leh ee wiishashka Tower SLI.Soo saaraha iyo alaab-qeybiyaha |Recen
RC-A11-II tusiyaha wakhtiga rarka badbaadada leh ee wiishashka Tower SLI.
1.Nidaamka badbaadada kala duwan ee wiishashka Tower
3.Friendly nin-mashiin interface
4. Had iyo jeer awood u leh inuu ku dhejiyo Shaxda Load cusub by USB drive.
5.Multiple load charts waa la soo gelin karaa hal mar
7. Tijaabada heerkulka warshadda, ka-hortagga wasakhda iyo ka-hortagga daxalka.
Waarta, Deggan, fududahay in la qiyaaso;
Nidaamka RC-A11-Ⅱ wuxuu bixiyaa la socodka waqtiga-dhabta ah jillaabka wiishka Tower Xaaladda dejinta si looga hortago shilka wiishka sababtoo ah culeyska xad dhaafka ah, hubi joogsiga inta u dhexeysa jaantus kasta, si loo hubiyo culeyska badbaadada leh ee wiishka Tower.
Heerkulka shaqada -20 ℃ ~ 60 ℃
Qoyaanka shaqaynaysa ≤95% (25℃)
danab koronto AC220V± 25%
Habka shaqada joogto ah
Khaladka guud ≤±5%
Cilada soo noqnoqda ee unugga rarka ≤±0.3%
Cilad aan toos ahayn ee unugga rarka ≤±3%
Daqiiqada Xamuulka Badbaado leh
Nidaamka RC-A11-Ⅱ wuxuu qaadanayaa cabbir buuxa oo ah 10 inch screen taabashada wuxuuna ku soo bandhigayaa Shiinaha iyo Ingiriisiga labadaba, kaas oo ka caawiya hawl wadeennada inay si fudud u rakibaan oo u isticmaalaan nidaamka.
Marka hawlwadeenku uu wado wiishka munaaradda,nidaamku waxa uu tusi karaa hawlaha shaqo ee wiishka munaaradda si uu uga caawiyo in uu si badbaado iyo waxtar leh u wado wiishka munaaradda.
Isku xirka bini'aadamku wuxuu muujinayaa dhammaan xaaladaha shaqada ee wiishka munaaradda oo ay ku jiraan dhererka jilbiska, raadiyaha shaqada (xagalka jilibka), xagal wax dilaya, culeyska jilbiska, xawaaraha dabaysha, masaafada socodka.
Dhanka kale, interface interface wuxuu bixiyaa tilmaamo digniin hore oo kala duwan, oo ku habboon wadayaasha si uu u xukumo xaaladda shaqada wiishka munaaradda ee goobta.
● Xogta kala duwan ee heerka shaqo ee wiishashka Tower si joogto ah ayaa loo qori karaa.
● Awood u leh inuu soo saaro sida faylka EXCEL oo uu ku soo dejiyo USB-ga
● Kormeeraha khadka ayaa diyaar u ah moduleka GRPS oo lagu daray.
Si loo fududeeyo maareynta dhismaha goobta, nidaamku wuxuu taageeraa rikoorka shaqada, rikoorka waqtiga-dhabta ah, rikoorka ka hortagga isku dhaca, duubista diiwaanka hawlgalka, diiwaanka xogta, ka sokow baarista maxalliga ah waxay taageertaa soo dejinta USB, waxaana loo arki karaa kumbuyuutarka sidii warqad shaqo. .
Hore: RC-A11-II Wiishka Tower Ka-hortagga isku dhaca, Nidaamka ilaalinta Aagga, Xilliga la qaado
Xiga: RC-FS08 Tusiyaha Xawaaraha Dabaysha Anemometer
Tilmaamaha Load Crane
Badbaadada Crane Tower Tower
Wiishka Tower LMI
Tusiyaha Dakhliga Load Crane Tower
Tusiyaha culeyska badbaadada leh ee Tower Crane
Aaladda Badbaadada Crane Tower
RC-02 Jiid dareenka cadaadiska
RC-10 Dareemka giraanta saxanka
RC-26 unugga xamuulka ee Kartridge
RC-105 Tusiyaha culeyska badbaadada leh ee wiishka mobilada
RC-01 Dareemaha qulqulka joogtada ah
RC-03 Dareemaha barokaca tooska ah
Nidaamka Isku dhaca Kahortagga ee Wiishka Tower, Shuruudaha Badbaadada Crane Tower, Tusiyaha Dakhliga Load Crane Tower, Badbaadada Salaanka Crane Tower, Tusiyaha daqiiqada Load, Mobile Crane Qatar,